पाँचथर विशेष « Mechipost.com
फिदिम । पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका वडा नं. ३ को वडाध्यक्षमा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार विमल राई २ मतको मतान्तरले विजयी हुनुभएको छ । राईले ८३७ मत
फिदिम । पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन् । कुम्मायक गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका बमप्रसाद लावती र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रमा महेन्द्रबहादुर खड्का
फिदिम । आठ वटा स्थानीय तह र ६० वटा वडा रहेको पाँचथरमा आइतवार बेलुकी १० बजेसम्ममा २६ वटा वडाको मतगणना कार्य सम्पन्न भएको छ । यस्तै जिल्लाको कुम्मायक गाउँपालिकामा मतगणना
हिलिहाङ–१ मा गठबन्धनको प्यानल नै विजयी
फिदिम । पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका–१ नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्यानल नै विजयी भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले वडाध्यक्ष जितेको यस वडाको वडाध्यक्षमा गठबन्धनबाट काँग्रेसका गाउँपालिका सभापति सन्तोष लिङदेन वडाध्यक्ष
फिदिम । पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा समेत मतगणना सुरु भएको छ । वडा नं. १ नवमीडाँडाबाट मतगणना सुरु भएको हो । उक्त वडामा हालसम्म ४०० मत गणना हुँदा गठबन्धनका उम्मेद्वारले अग्रता
पाँचथरमा पाँच स्थानीय तहमा मतगणना सुरु
फिदिम । पाँचथरका पाँच वटा स्थानीय तहमा हिजो सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानको मतगणना सुरु भएको छ । जिल्लाको फिदिम नगरपालिकामा वडा नं. १४ बाट मतगणना सुरु भएको छ ।
पाँचथरमा २३ हजार नयाँ मतदाता निर्णायक
फिदिम । पाँच दिनपछि स्थानीय तहको ऐतिहासिक दोश्रो निर्वाचन हुन लाग्दा पाँचथर चुनावी रौनकमय भएको छ । एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको पाँचथर राष्ट्रिय स्तरमा परिचय बनाएका नेताहरुको प्रतिष्ठाको
फिदिम । पाँचथरमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न पदमा ९०६ जनाले उम्मेद्वारीको मनोनयन दर्ता गराएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय फिदिमका अनुसार १४ वटा वडा रहेको फिदिम नगरपालिकामा सबैभन्दा
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा छ जनाको उम्मेद्वारी
फिदिम । जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा छ जनाको उम्मेद्वारीको मनोनयन दर्ता भएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मिक्लाजुङका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा नेकपा (एमाले)का नरेन्द्रकुमार बस्नेत, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अमरराज
फिदिम । पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पाँच जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गरेका छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय फाल्गुनन्दका सहायक निर्वाचन अधिकृत निर्मल तुम्रोकका अनुसार अध्यक्ष पदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दलसोर चेम्जोङ,
कुम्मायक अध्यक्ष चेम्जोङद्वारा राजीनामा
फिदिम । स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत उम्मेद्वारी दर्ता चलिरहँदा पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । उपाध्यक्ष सीता आचार्यलाई निवेदन दिँदै अध्यक्ष चेम्जोङले गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै जिम्मेवारीबाट